ပရိတ်သတ်တွေရဲ့အချစ်တော်လေးကတော့ သူ့မှာအားနည်းချက်တစ်ခုရှိနေတယ်ဆိုတဲ့ အကြောင်းပြောပြလာတဲ့ မူးလာ….… – Cele Snap
ပရိတ်သတ်တွေရဲ့အချစ်တော်လေးကတော့ သူ့မှာအားနည်းချက်တစ်ခုရှိနေတယ်ဆိုတဲ့ အကြောင်းပြောပြလာတဲ့ မူးလာ….…
ပရိသတ်ကြီးရေ . Myanmar Idol ပြိုင်ပွဲဝင်တစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ Mooler ကတော့ ပြိုင်ပွဲပြီးကတည်းက အနုပညာလောကထဲမှာ အောင်မြင်တဲ့အဆိုတော် တစ်ယောက်အဖြစ် ရပ်တည်နေခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ် ။ အမြဲတမ်းပျော်ပျော်နေတတ်ပြီး စနောက်နေတတ်တဲ့ မူးလာကတော့ သူ့ရဲ့ ပုံရိပ်လေးတွေကို ဟာသနှောပြီး ပရိသတ်တွေကို မျှဝေပေးလေ့ရှိတဲ့ အနုပညာရှင်တစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ် ။
လတ်တလောမှာတော့ သူ့ရဲ့ ပုံရိပ်လေးတွေနဲ့အတူ အခြေအနေနဲ့ လိုက်ပြီး မူးလာလေးက ရုပ်တော့ အမြဲပြောင်းနေပေမယ့် ချောတယ်ဆိုတဲ့ ခေါင်းစဉ်ကတော့ လွတ်မထွက်သွားတာ ခက်ရော ဆိုတဲ့ စာသားလေးနဲ့အတူ အရွှန်းဖောက်ပြီးရေးသားဖော်ပြခဲ့ပါတယ် ။ ရုပ်ချောတာက အားနည်းချက်လိုမျိုးများလားပေါ့ လို့လည်း စနောက်ရေးသားထားပါသေးတယ် ။
ပရိသတ်တွေကတော့ အရင်ကထက်ပိုပြီး ခန့်ညားလာတဲ့ Mooler လေးကို ချီးကျူးမှတ်ချက်လေးတွေ ရေးသားခဲ့ကြပါတယ် ။ မူးလာလေးကတော့ ပရိသတ်တွေအချစ်ပို အောင် နေတတ်တဲ့သူဖြစ်ပြီး ပရိသတ်တွေကတော့ အရင်ကထက်ပိုပိုချစ်ခင်လာကြကြောင်းလည်း ရေးသားထားကြတာတွေ့ရပါတယ် ။ယခုလို ဖတ်ကြားပေးကြတဲ့ ပရိတ်သတ်တွေအားလုံး သာယာပျော်ရွှင်တဲ့ နေ့လေးတစ်နေ့ကို ပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေလို့ ဆုမွန်ကောင်းတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်။
Source : Mooler
Credit ; (Yaung Chi)
ပရိသတျကွီးရေ . Myanmar Idol ပွိုငျပှဲဝငျတဈယောကျဖွဈတဲ့ Mooler ကတော့ ပွိုငျပှဲပွီးကတညျးက အနုပညာလောကထဲမှာ အောငျမွငျတဲ့အဆိုတျော တဈယောကျအဖွဈ ရပျတညျနခေဲ့ပွီဖွဈပါတယျ ။ အမွဲတမျးပြျောပြျောနတေတျပွီး စနောကျနတေတျတဲ့ မူးလာကတော့ သူ့ရဲ့ ပုံရိပျလေးတှကေို ဟာသနှောပွီး ပရိသတျတှကေို မြှဝပေေးလရှေိ့တဲ့ အနုပညာရှငျတဈယောကျဖွဈပါတယျ ။
လတျတလောမှာတော့ သူ့ရဲ့ ပုံရိပျလေးတှနေဲ့အတူ အခွအေနနေဲ့ လိုကျပွီး မူးလာလေးက ရုပျတော့ အမွဲပွောငျးနပေမေယျ့ ခြောတယျဆိုတဲ့ ခေါငျးစဉျကတော့ လှတျမထှကျသှားတာ ခကျရော ဆိုတဲ့ စာသားလေးနဲ့အတူ အရှနျးဖောကျပွီးရေးသားဖျောပွခဲ့ပါတယျ ။ ရုပျခြောတာက အားနညျးခကျြလိုမြိုးမြားလားပေါ့ လို့လညျး စနောကျရေးသားထားပါသေးတယျ ။
ပရိသတျတှကေတော့ အရငျကထကျပိုပွီး ခနျ့ညားလာတဲ့ Mooler လေးကို ခြီးကြူးမှတျခကျြလေးတှေ ရေးသားခဲ့ကွပါတယျ ။ မူးလာလေးကတော့ ပရိသတျတှအေခဈြပို အောငျ နတေတျတဲ့သူဖွဈပွီး ပရိသတျတှကေတော့ အရငျကထကျပိုပိုခဈြခငျလာကွကွောငျးလညျး ရေးသားထားကွတာတှရေ့ပါတယျ ။ယခုလို ဖတျကွားပေးကွတဲ့ ပရိတျသတျတှအေားလုံး သာယာပြျောရှငျတဲ့ နလေ့ေးတဈနကေို့ ပိုငျဆိုငျနိုငျကွပါစလေို့ ဆုမှနျကောငျးတောငျးပေးလိုကျပါတယျ။
မော်ဒယ်လောကမှာ ဖြစ်ပျက်နေတာနဲ့ ပတ်သတ်ပြီး Miss လောကကြီးပျက်စီးသွားလိမ့်မယ်လို့ သတိပေးလိုက်တဲ့ အလှမယ်သင်းသင်း
ယနေ့ အသည်းကွဲတဲ့ရောဂါသီချင်း ပိုင်ရှင်ကြီး တေးရေး/တေးဆို လာဇရု ကွယ်လွန်သွားခဲ့ပါပြီ…..